Shinoa vita amin'ny Roller Blinds China mpanondrana sy orinasa | ETEX
Lamba lamba Fabric Roller no lasa malaza indrindra eto an-tany amin'izao fotoana izao ho an'ny firavaka amin'ny varavarankely. Hararaoty ny fampiasana mora foana, fomba tsotra, safidy tsy misy farany vita amin'ny lamba. Ny olona dia mifidy jamba Roller bebe kokoa hatrany ho an'ny haingo. Ny blinds roller blindmade dia manome andian-dahatsoratra feno sy lamba hafa mifandraika, ny mpanjifa dia afaka manokatra sy mametraka azy DIY. Mora mametraka ary mora ova.
Fomba jamba Roller:
Roller blinds dia vahaolana mahomby sy azo tanterahina ary azo tanterahina amin'ny fikandrana jamba izay nentim-paharazana nefa ankehitriny.
Ireo jamba roller dia ahafahanao mamorona ny toe-javatra tsara sy ny rivotra tianao indrindra amin'ny tokantranonao haingana
roller Blinds dia mifanaraka tsara amin'ny varavarankely rehetra misy azy, ary manome endrika tsara tarehy sy modely amin'ny haingoo.
Ny roller Blinds dia tonga ao anaty lamba tsy manam-paharoa amin'ny sun control, anisan'izany ny blackout, translucent, ary sunscreen.
Azonao atao ihany koa ny manana fifehezana tanteraka amin'ny alàlan'ny jamba roller roa ary mifindra fotsiny avy amin'ny alàlan'ny translucent, na sunscreen mankany blackout amin'ny fotoana rehetra, mihazona trano milamina mandritra ny taona. Fitaovana fihenjanana no napetraka miaraka amin'ny fifehezana ny gadra rehetra mba hahazoana antoka ny fiarovana ny zanakao.
Ampiasaina am-pitiavana any Café, Sekoly, trano, trano ivarotana, fivarotana, trano fandraisam-bahiny, hopitaly ary ny toerana hafa rehetra amin'ny fanaovana sary. Ireo jamba roller dia mampiasa anatiny na ivelany. Miorina amin'ny fisafidianana tsy misy farany fitaovana sy rafitra.
Type blind blind Type:
Manaova fanatanjahantena fanatanjahantena
Rindrina roa sosona
Blackind Roller Blinds
17mm Mini Roller Blind ho an'ny haingo fikandrana
Lamba vita amin'ny lamba, 100% polyester
Haingam-pandeha hazavana> Aostralia 4.5
Roller Tube Aluminum alloy 17/25/28/32/35/38 / 40mm
Ambony Rail Aluminum alloy, endrika lemaka / endrika arc / endrika boribory
Rafitra fandefasana kofehy / tady plastika / rojo vy / mpanara-maso lavitra
Fomba fandidiana havanana / ankavia
Natao ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, Hotel, Balkona, efitrano fandraisam-bahiny, Hotel, Office sns.
Fandrindrana fampandehanana, fahatsiarovana hafanana
Manaraka: Lamba vita amin'ny lavenona / romana